Ida Vitale anokunda iyo Cervantes Prize. 7 nhetembo dzakatanhamara | Zvazvino Zvinyorwa
Nyanduri Ida Vitale (Uruguay, 1923) anga ari iye anokunda iyo Cervantes Mubairo, tsamba dzakakurumbira dzeSpanish, dzakatumirwa zvakare paZuva reBhuku. Iri rimwe gore rakateedzana kuti mubairo unoyambuka nyanza uye unoenda mumaoko emunyori ane basa rakareba kwazvo. Ndinotora 6 yenhetembo dzake inonyanya kuzivikanwa.
2.1 Kuti udzike pasi
2.4 Nyika ino
2.5 Zvisungo zvezuva nezuva
2.6 Kuva ndega
Akazvarwa mukati Montevideo, Ida Vitale is mudetembi, muturikiri, munyori uye munyori wezvekunyora, uye chikamu chekufona Chizvarwa che45, uko vanyori vakaita sa Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti o Idea Vilariño. Nhetembo yake inotakura zvipikisheni zve njere, asiwo mukurumbira, ivo pasi rose uye zvakare zvemunhu, uye nekudaro njenjemera pakadzika.
Akagamuchira mimwe mibairo yakati wandei seye Octavio Paz Mubairo, the Alfonso Reyes Mubairo, the Reina Sofia Mubayiro kana iyo Federico García Lorca Mutambo Wenhetembo wepasi rose. Iyo Cervantes haina mubvunzo kupedzisa kubata kune akawanda makore nebasa. Parizvino anogara muUnited States.
Pakati pebasa rake, mazita e Chiedza cheiyi ndangariro, Zviroto zvekusingaperi, Iko kunofamba nhunzi, magariro ekufungidzira o Infinity kudzikisira.
Kuti udzike pasi
Iwe unopfeka shangu dzako dzemvura,
uye kusava netariro kwechimvuramabwe,
gamuchirai mukombe wamangwanani unopenya,
iyo inotonhora pamusoro peganda remarara,
concocts zvinopesana zvirongwa,
apostrophe uye kushungurudzika,
kufunga purr wenhetembo
akadzivirirwa pamubhedha, sekatsi.
Asi ipa zvishoma nezvishoma
Buruka, upinde mumunda wedhaidhi yerufu,
Kufanana nemazuva ese,
zvipikirwa zvezvinogona kureva,
inoita kuti ive yekushongedza.
Kurongeka kwayo kusingatsanangurike
Kamwe pasango remashoko
mvura yekuvandira yemashoko,
izwi rine mutsindo kana risingataurwe
kusevezera kunonaka moss,
kutinhira kushoma, murarabungu wemuromo
yezvinogoneka oh zvishoma kupesana kushoma,
paiva nezvakanaka nezvakaipa,
hongu uye kwete,
neizwi mune rimwe nerimwe remashizha aro.
Hazvizombofi zvakare, zvinganzi,
Ini ndinongogamuchira ino nyika yakavhenekerwa
ichokwadi, fickle, yangu.
Ini ndinongokwidziridza yayo yekusingaperi labyrinth
uye mwenje wayo wakachengeteka, kunyangwe ukavanzwa.
Muka kana pakati pezviroto,
guva rake repasi
uye ndiko kutsungirira kwako pandiri
Iine denderedzwa rematsi,
kwandinomirira ndisina kuona
Dzimwe nguva mwenje wayo unoshanduka
dzimwe nguva kashoma
Mumwe munhu anogona kudaro
hafu yakavhurika mikova,
Ndinogara maari chete,
Ndinovimba kubva kwaari,
uye pane kushamisika kwakakwana.
Zvisungo zvezuva nezuva
usakanganwa wakisi yakasviba
kuti unofanirwa kuradzika musango,
kana sinamoni yakanakisa,
hapana zvimwe zvinonhuwira zvaidiwa.
Mhanya, gadzirisa, ngarava,
tarisa tsika dzese dzepamba.
Yakanamatira munyu, kune uchi,
upfu, waini isingabatsiri,
famba pane zvisina basa pasina kumbomira,
mhere inopisa yemuviri wako.
Pfuura, kuburikidza neiyi imwechete threader tsono,
pakati pejira rimwe nerimwe,
zvidimbu zvedenga rakaputswa.
Uye izvo zvinogara zviri muruoko bhora
sekuchinja kweimwe maze.
tsvaga kufarirwa pakati pengano.
Ariadna iwe hauna kununurwa
uye pasina boka renyeredzi kukupfekedza korona.
Kusafara uri wega,
murume ane rombo rakanaka pamucheto wega.
Zvakadiniko? Chii chimwe chaunotambura?
Chii chakasimuka iwe unobvunza, ingo nhuwira uye wakasimuka,
kubata kusinganzwisisike, ruvara uye pingi,
pasina munzwa wakaoma?
anokwira kubva padanda kuenda kuequator
kuenda kwayo pasi
kuchiroveropa cheropa paunowira
iyo nhoroondo yakarurama kwazvo
yekugara uchichera muQuevedo
kerubhi rekuvenga kwakapinza
akasununguka mune mana ekupedzisira emurume
rufu mutongo gehena kubwinya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Ida Vitale anokunda iyo Cervantes Prize. 7 nhetembo dzakatanhamara